Ukhuphiswano lweZakhono zokuQala lukaYucera
Ukhuphiswano lokuqala lwezakhono lomsebenzi waseYucera lwezinto zebhloko zirconia luqale ngoJulayi 12 th, olwaluxhaswe yiOfisi kaManejala Jikelele. Umnyhadala wonke wohlulwe waba ziinxalenye ezintathu: ukubhaliswa kunye nokuphononongwa, ukhuphiswano kwindawo yesiza, kunye nefoto yeqela elinikezela amabhaso. Ngaphezulu kwama-30 ...
Qiniseka kwinjongo yakho, kwaye uqhubeke ukhuthaza.
Intlanganiso yesishwankathelo sonyaka ka-Yu Rucheng wama-2021 yabanjwa ngembeko. Phantsi kobunkokheli bomphathi jikelele uMnu Liu Jianjun, abantu abakumgangatho ophezulu kwisebe lezentengiso beza namaphupha abo, beshwankathela ukungabikho komsebenzi kwisiqingatha sokuqala ...
I-Yucera ayizange iyeke inyathelo labo ukuya phambili.
Njengomvelisi oqeqeshiweyo we-CAD CAM yamazinyo e-zirconia ceramic block, i-Yucera ine-mission "yokuzibophelela ekuveliseni izixhobo zirconia zamazinyo ezikumgangatho ophakamileyo kunye nokwakha uphawu oludumileyo lwehlabathi lwezinto ze-zirconia zamazinyo"; I-Yucera ayizange iyeke inyathelo labo ukuya phambili. Xoxa ...
I-Dental South China 2021 International Exhibition ngokusesikweni yafikelela esiphelweni ngenqaku eligqibeleleyo.
I-Dental South China 2021 International Exhibition ngokusesikweni yafikelela esiphelweni ngenqaku eligqibeleleyo. I-Shenzhen Yurucheng Dental Materials Co., Ltd. iyaqhubeka inyathela phambili! Iintsuku ezine zamazinyo ke ...